Vaovao - vokatra sy kojakoja marathon manokana
Raha resaka ezaka sy hetsika asa soa, marathon no anisan'ny safidy malaza indrindra any. Ny hazakazaka marathon dia mamela ny mpihazakazaka hampiseho ny tanjany, ny fahaizany ary ny fanolorantenany amin'ny fiantrana na mpanohana azy amin'ny vokatra marathon mahazatra. Tsy misy na inona na inona toy ny andro fanatanjahan-tena mafy handrisihana ny olona hanome sy olona maro kokoa hiditra ao; na ho an'ny voninahitra, ny fandraisana anjara na ny fahafaha-mandresy aza aorian'ny fiofanana amam-bolana na taona maro.
Miaraka amin'ny marathon mitazona fihetseham-po mahery vaika toy izany ho an'ny olona marobe, ary miaraka amin'ireo mpihazakazaka aman'hetsiny miditra amin'ny hetsika isan-taona, tsy mbola nisy fotoana tsara kokoa nanatsarana ny fisintomana nataonao tamin'ny dingana manaraka. Ho an'ireo mpikarakara marathon, mihasarotra hatrany ny fitsanganana amin'ny vahoaka; fa azo antoka fa be dia be ny azo atao mba hahafantarana ny marikao eo no ho eo manoloana ireo hetsika hafa any. Ny fomba iray tsara hanombohana dia amin'ny fampiasam-bola amin'ny akanjo namboarina ho an'ny vanin-taona marathon amin'ny fahavaratra, avy amin'ny T-shirt manokana hanamboarana ny safidinao.
Voninahitra ho anay ny miara-miasa amin'ny fikambanana Imbube Marathon, manome andian-dahatsoratra ho an'ny hetsika miaraka amin'ny lobaka, lobaka, lobaka polo, fanamiana mpitsara, medaly, lamba famaohana marathon, ba kiraro, satroka, amboara, fehiloha vita amin'ny silika, sorabaventy, sainam-boaloboka, fonosana fefy Sns
Momba ny Marathon Imbube: ny mpanjaka, Mswati III Mpanjaka dia nahita fahitana kilasy an'izao tontolo izao, hazakazaka lavitra ezaka ho an'ny The Kingdom of Eswatini. Ny Tahirim-bolam-pirenena Eswatini, miaraka amin'ireo hetsika mpanohana lehibe, Standard Bank Eswatini dia faly fa afaka mandray an'io hetsika malaza io isaky ny Alahady voalohany amin'ny volana Oktobra (6 Oktobra 2019).
Moa ve ianao mikasa hampiasa vola amin'ny t-shirt na kojakoja manokana ho an'ny Marathon ho avy? Avy eo ny Build Your Own Garment no serivisy ho anao. Mamorona akanjo sy kojakoja namboarina izay mifanaraka tanteraka amin'ny marika hetsika, tsy misy ezaka. Tsy mila fizotrana sarotra, fihodinana lava na rafitra manakorontana. Raha mangataka teny nindramina ho an'ny serivisinay dia mifandraisa aminay izao.